နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နဲ့အတူ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်လာတာကို တွေ့မြင်ချင်ပါကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ရဲ့ စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း (၉၀၀) ကျော် ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်တွေက မေးမြန်းရာမှာမြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ဥရောပသမဂ္ဂ နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့ဆီက ရရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆိုတဲ့ စာရင်းမှာ ပါဝင်သူ အများစုကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့သူတွေက တချို့ကတော့ ရာဇ၀တ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က သင့်တော်တဲ့ အချိန်မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမှာပါလို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Those peoples who left in the prison are not terrorists and they were sent to prison for their political believe by former dictator Than Shwe regime. They want Country stability and peaceful transition to Democracy as what President U thein Sein wanted today. We believe President U Thein Sein is sincerely doing his best for country future and it's what opposition wanted for decades. President must release those political prisoners as soon as possible. If Government thinks some peoples have criminal activity and then they deserve for retrial their case in open court.
အော်.မောင်ဝဏရယ်၊ကိုသူရပြောသလို တာဝန်ဆိုလဲကိုယ့်ကိုထိပါး တဲ့အခိုင်းကိုလည်းဘဲ၊ အသေချာ လုပ်/ပြော မှာလားလို့....သတိချပ်ပါ။
အန်တီကလင်တန်ရေ၊ ကတိတောင်းပီးမှမုန့်ပေးပါနော်။ ထပ်ပြောပေးပါဦး၊ အေဒီဘီ အကြွေးလည်းဆပ်ပေးပါအုံး..လို့
ကိုသူရက တစ်ယောက်ဒေါ်လာ၂၀၀တဲ့၊ အဖေမဆပ်တော့လည်း
ငိုပီးတာဝန်ယူရတော့မှာပေါ့။ သခင်မျိုးဟေ့-ဒို့ဗမာ လို့ဒို့ဗိုလ်ချုပ်
ပြောခဲ့ပေသကိုး။ ဗမာမှန်လျှင် လူမျိုးကြီးဆိုတာသိကြပါနော။